सफलताको कथा : गोरखाका पिर मोम्हमद यसरी बने कतारका ठूला अत्तर व्यवसायी - Kishor Panthi
यो रिपोर्ट खसोखासका लागि नेपाल सम्पादक अस्मिता खड्काले तयार पारेकी हुन् ।
सबै नेपाली विदेशमा मजदुरी गर्न मात्र जाँदैनन् । कैयौँ नेपालीहरु विदेशमा आफ्नो व्यावसाय गरेर विदेशीहरुलाई काम समेत दिएका छन् । ती मध्येका एक हुन, गोरखा आहाले भङ्ज्याङका पिर मोम्हमद । उनी कतारको परिचित पफ्र्यूम व्यवसायी हुन ।
२००६ मा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न काठमाडौं छिरेका उनी धेरै पढेर देशमै व्यवसाय गर्ने इच्छा थियो । घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाले बिचमै पढाई छोडेर परिवारको राम्रो भविश्य बनाउने सपना आँखामा सजाउँदै विदेश लागेँ ।
पढाईमा अब्बल,मेहनती र इमान्दार मोम्हमद घरको जेठो छोरा भएकाले परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो । बुबाको सानो व्यवसाय, त्यसैबाट १० जनाको परिवार पालिनु पर्ने बाध्यता । त्यसमाथि सात जना भाईबहिनीको पढाई । जसको कारण उनले बिचैमा पढाई छोड्नु पर्ने भयो ।
साना भाई बहिनीलाई राम्रो शिक्षा र आम बुबालाई सुखी देख्न चाहान्थे उनी । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अध्ययन गर्ने चाहानालाई छोड्दै, पैसा कमाउन कतारको एउटा कपडा पसलमा पुगेँ ।
नेपालमा रहँदा पढ्दै र पढाउँदै गरेका पिर मोम्हमदको लागि अर्काको देशमा काम गर्न जानु रहर होइन, बाध्यता थियो ।
उनीसँगैका दौतरीहरु अहिले पनि गाउँमै छन् । कतार जाँदा उनी भर्खर १९ वर्षमा टेकेका थिए । कलिलो उमेरमा देश र परिवारभन्दा टाढा बस्नुको पीडालाई कर्तव्यले दबाई राखेँे । आफ्नो पीडा देख्दा भाईबहिनीको भविश्य अन्धकार भएको सम्झन्थे उनी ।
मुमाका हातको खाना, बुबाको साथ र भाई बहिनीसँग रमाउने उमेरमा विदेशी भूमिमा पसिना मगाउने मोम्हमतका कथा पाइला–पाइलामा फरक छन् । काठमाडौंको आरआर क्याम्पसमा ब्याचलर अध्ययन गर्दै गर्दा गाउँको दाजुको साथ लागेर कतारको कपडा पसलमा कामदारको रुपमा पुगेका थिए । कतारमा उनले काम गर्न थालेको अहिले ११ वर्षपूरा भयो ।
कपडा पसलपछि उनलाई पफ्र्यूम पसलमा काम गर्ने मौका मिल्यो । त्यो पफ्र्यूम सोरुममा उनले पाँच वर्षसम्म सामान्य कामदारको रुपमा निकै मेहनत गर्नु परेको थियो ।
मुस्लिम र अरबिक भाषा जानेका कारण उनलाई काम गर्न र सिक्न केही सहज भएपनि हेपाईसँग खुशी साट्दै, आफ्नो मिसनमा लागि रहेँ । ‘पाँच वर्षसम्मको ठूलो परिश्रमले म पफ्र्यूम बनाउन सक्ने भएँ’ उनले सुनाएँ । ‘पफ्र्यूम मुस्लिम समुदायमा नभैहुँदैन । हाम्रो समुदायमा उपहार स्वरुप दिने प्रचलन छ । मस्जिदमा जाँदा पनि पफ्र्यूम लगाउनुपर्छ ।
यो व्यवसाय धर्मसँग नजिक रहेकाले पनि म सफल भएको हुँ ।’ पफ्र्यूम कम्पनिमा काम गरेको दुई वर्षपछि उनले सोचेँ, हामीले मेहनत गरेर अरुलाई दिएकाछौँ भने यो काम आफै किन नगर्ने ? उनले रातदिन महनत गरेर आफ्नै कम्पनि चलाउने मनमनै अठोट र संकल्प गरेँ ।
पफ्यूमका बारेमा बढी चाँसो राखेर सिक्दै गएँ । छुट्टिको समयमा साथीभाईहरु घुमफिर गर्दा, उनी भने सिनियर साथीहरुसँग सिक्ने काम गरँे ।
काम गर्ने कम्पनिमा भारतियहरु पनि थिए । तर, उनीहरुले नेपाली भनेपछि कहिल्यै अगाडि आउन नदिएको बताए । ‘नेपालीले के गर्न सक्छन् भन्दै बारम्बार हेप्ने गर्दथेँ’ उनले सुनाएँ । उनले अगाडि थप्दै भने ‘भारतियहरुको दिमान नकारात्मक सोचले भरिएको छ ।’
सुडानका साथिहरुसँग एकले अर्कोलाई भाषा सिकाउँदै जाँदा पफ्र्यूम बनाउन प्रयोग हुने विधि र तरिकालाई उनले निकै चासोँ दिएर सिके ।
काम गर्ने र सिक्ने इच्छा देखेर अफ्रिकन र सुडानीहरुले माया गरेरै सिकाए पनि । उनीहरुसँगको सम्बन्धले शिप सिक्ने सुनौलो अवसर मिल्यो । उनले कम्पनिमा कामको साधै पप्mर्यूम बनाउने तरिका अध्ययान गर्दै गएँ ।
त्यसको लागि मोम्हमतले पाँच वर्ष दिनरात एक बनाएर दुःख गर्नु पर्यो । पाँच वर्षपछि त्यो कम्पनिको मालिकबाट उनलाई नसोचेको अफर आयो, ‘मिलेर काम गर्ने ।’
उनले यसलाई इमान्दारी पूर्वक गर्ने अठोट आफैसँग गरे । ‘कम्पनिको मालिकले मेरो काम नजिकबाट अध्यायन गरेका रहेछन् । मलाई थाहा थिएन । ती उद्योगिले भित्री रुपमा मलाई काम राम्रो गर्नेमा राखेका रहेछन् । त्यो कुरापछि मात्र थाहा भयो ।’ मिलेर काम गर्ने अफरलाई स्वीकार गरेपछि कतारिले सम्पूर्ण जिम्मेबारी उनलाई दियो ।
‘मेरो इमान्दारीताले यहाँसम्म ल्याई पुर्याएको हो । पहिलो तलब बुझ्दाको सम्झना छ । जम्मा ६ हजार बच्यो । बुबालाई फोन गरेँ । ६ हजारले त्यहाँ के होला र ? म यहीँ काम गरौं की घर आऊँ ? बुबाले भन्नुभयो, ‘तिमिलाई खान पुग्छ भने नआऊ, यताको चिन्ता नगर ।’ उनलाई बुबाको त्यो भनाईले काममा सफलता पाउन धैर्यता गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो ।
उनले भने ‘यदि बाबले साथ र हौसला नदिएको भए, पहिलो तलबसँगै घर फर्कने थिएँ । कतारको पहिलो कम्पनि सञ्चालन गर्ने व्यवसायी बन्न, मेरो परिवारले पनि त्यत्तिकै महनत गरेको छ ।’
‘समान्य कामदारको रुपमा कतार छिरेको नेपालीको छोरा यति छिटो पफ्र्यूम व्यवसायी बन्छु भन्ने सोचेको थिइन’ ‘काम सिक्छु भन्ने चाहिँ थियो’ मोम्हमतले सुनाए ।
अहिले कतारमा उनको दुई वटा सोरुम सञ्चालनमा छन् । सामान्य पसललाई उनले फ्याक्ट्रीमा बदलि दिएका छन् । उनी कतारको ठूलो होलसेलर व्यवसायी मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्दछन् ।
उनले उत्पादन गरेको पफ्र्यूम दोहा,दुवई, कतार,बहराइन र मिडिलिस्ट देशहरु सबैमा जान्छ । उनको फ्याक्ट्रीमा ८ जना नेपाली काम गर्दछन् । त्यसको अलवा कतारका १६ जना महिलालाई घरमै काम दिएको उनले बताए ।
कतारका ती सबै महिलालाई उनी आफै तालिम दिएका थिए । उनको फ्याक्ट्रीमा पफ्र्यूम, धुप,स्प्रे, कपालको तेल,साबुन र इयर फेस्र्नर आदि उत्पादन हुँदै आएको छ ।
उनको कम्पनीको नाम अल मजालिस हो । मेडिन कतार भनेर सञ्चालनमा आएको यो पहिलो कम्पनि हो । उनको उत्पादन नेपालमा आएको त छैन तर, कतार पुगेका नेता प्रचण्डदेखि रेखा थापासम्मले लगाईसकेका छन् ।
उनले भने‘कलाकार र उद्योगी व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा अडर गर्नु हुन्छ त्यो अनुसार पठाउने गरेको छु,’ ‘कच्चा पर्दाथ, सिंगापुर, मलेसिया र युरोपका बिभिन्न मुलुकबाट आउँछ ।’
काम प्रति निकै लगनशिल मोम्हमत रातीमा ५÷६ घण्टा मात्र आराम गर्दछन् । उनले रातमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्दछन् भने दिनमा पसलमा । समय मिल्यो कि फ्याक्ट्रीमा नयाँ कसरी बनाउने भन्नेमै बिताउँछन् ।
उनले आफ्नो सफता पछाडिका पीडा सुनाउँदै भने ‘पुराना र अन्य देशका मानिसले काम सिकाउँदैनथ्ये । भारतियहरुले सबैभन्दा धेरै हेप्ने काम गरे । दुःख लाग्दथ्यो ।’ मनको कुरा खोल्दै भने ‘विदेश जाने नेपालमा भन्दा राम्रो कमाउन हो । मेरो हकमा कमाई नेपालको भन्दा कम भयो । विदेश गएको ३ महिना त कतिबेला घर जाऊँ जस्तो लाग्थ्यो ।
त्यसमाथि नेपालीलाई गरिने व्यवहार र वतावरण देख्दा झनै पीडा हुन्थ्यो । तर, घरको जेठो छोरा कर्तव्यले च्यापेको थियो । त्यसकारण सबै पीडालाई पचाउँदै काम गरेँ ।’
हिजो कतारमा नेपाली भन्दै हेप्ने भारतियहरु उनलाई अहिलेसम्मान गर्छन । तिनै भारतिय साथीहरु अहिले मोम्हमत कहाँ काम माग्न आउँछन रेँ ।
उनले भने ‘दुई जना भारतियलाई मैले काम लगाई दिएको छु । उनीहरुले जति हेपेर कुरा गर्दा पनि मैले कहिल्यै अपमान गरिन ।’ उनलाई नेपाली भनेर हेप्ने भारतियहरु अहिले पनि कामदार नै छन् तर, उनी कतारको परिचित पफ्र्यूम व्यवसायी बन्न पुगेका छन् । समयको खेल मान्नुपर्छ हिजो उनलाई काम सिक्छ भनेर लुकाउनेहरु अहिले भेटमा सलाम गर्दछन् ।
यता देशमा लगानी लगाउने वतावरण सृजना भयो भने छिट्टै लगानि भित्र्याउने योजनामा उनी छन् । त्यसको साथै दुवैईमा पनि कम्पनिको शाखा खोल्ने उनको अर्को योजना छ ।
‘नेपालमा सबै समान विदेशबाट आउँछ । अहिलेसम्म नेपालमा पफ्र्यूम बनाउने फ्याक्ट्री भएको मेरो जानकारी छैन,’ उनले भने ।
उनमा विदेशमा सिकेको शिप देशमा भित्राउने तिब्र इच्छा छ । ‘मेरो शिप खेर जान दिने छैन । म देशका युवाहरुलाई सिकाउँछु । पफ्र्यूमको लागि नेपालमा धेरै कच्चा पदर्थ छन् ।
जुन अहिले खेर गएका छन् ।’ ‘पफ्र्यूम बनाउने कच्चा पदार्थलाई हामीले दाउराको रुपमा प्रयोग गरेर खाना पकाएका छौँ । विदेशमा एक किलोको नेपाली ५० हजारदेखि ५० लाखसम्म पर्दछ तर हामीलाई थाहा छैन’उनले दाबी गरे ।
← अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
अमेरिकी सरकार शटडाउनमा देशनिकाला भने जारी, ४०० अध्यागमन न्यायाधिस विदामा →